Jika ngokukhawuleza kwiPrototype- iPandawill Technology Co, Ltd
I-Pandawill iyaqonda ukuba ixesha libaluleke kakhulu xa ujonge ukuvuma iprototype okanye ukuvelisa ibhendi yenqwelomoya yee-PCB zokuvunywa koyilo. Siyazi nokuba iiprojekthi ziqhutywa ngexesha okanye kwangoko, kwaye amaxesha amaninzi ukungxamiseka kweebhetshi zohlobo lwenene kuyinyani.
Isebe lethu lobunjineli leCAM liya kuqinisekisa ukuba akukho xesha lilahlekileyo ekufumaneni uyilo lweprototype yakho ekwenziweni nasekuhanjisweni ngexesha. Sinokuvelisa uyilo lwe-PTH elula enamacala amabini kunye namacala amabini kwiiyure ezingama-24 kwimithamo emincinci kunye neeyure ezingama-72-96 ze-multilayer ukuya kuthi ga kwi-8. Kwiibhodi ezingxamisekileyo, Nceda usazise kwangaphambili ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuba idatha iyaqhubeka ngomzuzu wokufumana kwethu idatha. Kwaye siya kuqinisekisa ukuba akukho xesha lilahlekileyo kwinkqubo yokwenza.
Udidi Ukujika ngokukhawuleza komzekelo Ixesha eliPhambili lokuKhokela (ibhetshi encinci)
Maleko 2 Iintsuku ezi-2 Iintsuku ezi-5
Maleko 4 Iintsuku ezi-3 Iintsuku ezi-6
Maleko 6 Iintsuku ezi-4 Iintsuku ezisi-7
Maleko 8 Iintsuku ezi-5 Iintsuku eziyi-8
Maleko 10 Iintsuku ezi-6 Iintsuku ezili-10
Yonke idatha ilawulwa ukwenzela ukuba utshintsho olulandelayo kwimveliso yevolumu luqinisekise ukuqhubeka ngokupheleleyo phakathi kwezinto kunye noyilo olusetyenziselwa ukwamkela iiprototypes kunye nobungakanani bemveliso yevolumu. Imijikelezo yePandawill lukhetho olufanelekileyo lomsebenzi wakho wohlobo kwaye siya kunceda ukwandisa uyilo kunye nokubekwa kweeprototypes zakho ukufezekisa iindleko eziphantsi kakhulu ezinokubakho kwimithamo yakho yokuvelisa evunyiweyo.
Thetha nePandawill kwaye siya kukunceda kwisantya sakho kwintengiso.